Public Health Concern फेरी कुटिए स्वास्थ्यकर्मी : स्यानीटाईजर खन्याएर टाउकोमा आगो लगाइदिन्छु भन्दै हातपात / – Public Health Concern
प्रहरी चौकी र गाउँपालिकाले अहिले मिल्न दवाब
विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको चार दिन नबित्दै हुम्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण भएको छ।
हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक काली बहादुर बुढा माथि एक जना व्यक्तिले हातपात गरेका छन्। कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेकी श्रीमतीको नियमित परीक्षण नगरेको भन्दै उनका श्रीमान् अमृत रोकायाले स्वास्थ्य संयोजक बुढा माथि हातपात गरेका हुन्।
उनीहरु गाउँपालिकाले स्थापना गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा समेत बस्न नमानेको उनले बताए। कोरोना पुष्टि भएपछि अमृत रोकायाका श्रीमती होम आइसोलेसनमै छिन्। श्रीमतीको नियमित परीक्षण नगरेको भन्दै आक्रोशित भएर आफू माथि हातपात गरेको बुढाले बताए।
‘मेरो परिवारलाई हेर्न आएन भन्ने आक्रोशले मलाई पिट्नुभयो। उहाँले पन्चीङ मेसिनले मेरो टाउकोमा हान्नुभयो’ उनले भने, ‘मैले त्यो पन्चीङ्ग मेसिन हातमा ठेलेपछि भुईमा खस्यो। त्यसपछि उहाँले ल्यापटपको चार्जरले हान्नुभयो। त्यो पनि मेरा अन्य सहकर्मीहरुले खोसे। अनि फेरी मलाई एक्कासी हातपात गर्न आउनुभयो।’
भौतिक आक्रमण भएपछि उनले प्रहरी चौकी र गाउँपालिकामा दोषी माथि कारबाहीका लागि निवेदन दिएका छन्।
घटना के कसरी घट्यो? लगायत विषयमा हामीले आक्रमणमा परेका स्वास्थ्य संयोजक बुढासँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। घटनाको जानकारी उनकै शब्दमा :
जेठ १८ गते यहीको स्थानीय अमृत रोकाया आफु बिरामी थिए। उनले मलाई आफू बिरामी भएको भन्दै फोन गरे। मैले अहिले डाक्टरहरु यही छन्, उपचारका लागि आउनु भनेर बोलाए। परीक्षणका क्रममा उनको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा सबै ठिक थियो। तर शरीर अलिअलि कामी रहेको थियो। उनको अवस्था अनुसार डाक्टरले औषधि दिए।
त्यसको भोलिपल्ट उहाँ र उहाँको श्रीमती लगायत ६/७ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्‍यौँ। परीक्षणमा उहाँको श्रीमतीको रिपोर्ट कोरोना पोजिटिभ आयो भने उहाँको नेगेटिभ आयो। उहाँको श्रीमतीलाई कोरोना देखिएपछि हामीले दिनुपर्ने औषधि सहित मास्क, ग्लोब्स सबै दियौँ। उहाँहरु गाउँपालिकाले स्थापना गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा बस्न मान्नु भएन। किन मान्नु भएन थाहा छैन। त्यही भएर उहाँको श्रीमती होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ।
यहाँ आइसोलेसनमा खटिएका एक चिकित्सकलाई हामीले बिरामीको परीक्षण गर्न समेत पठाइयो। उहाँको अवस्था सामान्य नै थियो। उहाँको श्रीमतीलाई राति ज्वरो आएछ।
हाम्रो यहाँ एक जना कोभिडको सामग्री वितरण गर्ने अनमी हुनुहुन्छ। बिहान उहाँ आउनु भएछ अनि अनमीसँग औषधि माग्नु भएछ। उहाँले औषधि के दिने कस्तो दिने थाहा छैन भन्नु भएछ। त्यसपछि उहाँ अमृत रोकाया बिहान ८ बजेरतिर मेरो कोठामा पस्नु भयो। म त्यो बेला काम गर्दै थिए।
उहाँ सेनिटाइजर खन्याएर तेरो टाउकोमा आगो लगाइदिन्छु भन्दै मेरो कोठामा छिर्नुभयो। मलाई त उहाँ जिस्कनु भयो जस्तो ठाने। तर मेरो कोठामा छिरेपछि उहाँले पन्चीङ्ग मेसिनले मेरो टाउकोमा हान्नुभयो। मैले त्यो पन्चीङ मेसिन हातमा ठेलेपछि भुईमा खस्यो। त्यसपछि उहाँले ल्यापटपको चार्जरले हान्नुभयो। त्यो पनि मेरा अन्य सहकर्मीहरुले खोसे। अनि फेरी मलाई एक्कासी हातपात गर्न आउनुभयो।
मैले प्रहरी चौकी र गाउँपालिकामा निवेदन दिएको छु। अहिले मिल्नुपर्‍यो भन्ने कुराहरु गरिरहनु भएको छ। तर अहिले म मिलौँला तर भोलि फेरि मेरो कुनै कर्मचारीलाई हातपात गर्‍यो भने के गर्ने? सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसैले म मिल्न सक्दिन कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने मेरो कुरा छ।
मेरो परिवारलाई हेर्न आएन भन्ने आक्रोशले मलाई पिट्नुभयो। उहाँ यही गाउँपालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा बस्नु भएको भए मलाई सजिलो हुन्थ्यो। तर व्यक्ति घरमा बसेपछि व्यक्ति व्यक्तिको घरमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउन पनि संभव हुँदैन। त्यही माथि उहाँहरुले कोरोनाको विशेष औषधि चाहियो भन्नु हुन्छ। हामीले अब कोरोनाको विशेषज्ञ औषधि कहाँबाट ल्याउने? श्रोत : स्वास्थ्यखबर